နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ Lemon Festival ရှောက်သီးပွဲတော်– XIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ Lemon Festival ရှောက်သီးပွဲတော်– XIII
နားရက်အခါကြီးမှာသာယာရွှင်လန်းကြပါစေ၊ Lemon Festival ရှောက်သီးပွဲတော်– XIII
Posted by Kyaemon on Feb 25, 2013 in Education, Entertainment, Photography, Travel | 11 comments
France Menton Lemon Festival
အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကSpring Festival နွေဦးကြို
Lunar New Yearနှစ်သစ်ကူးပွဲကျင်းပကြသလို၊
တောင်ပိုင်းပြင်သစ်နိုင်ငံMenton အရပ်ကလဲ နွေဦးကိုကြိုတဲ့
စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပတာ ၂၀၁၃ ဆိုရင်
အနှစ် ၈၀ တောင်ရှိပါပြီ၊
(ပုံအကြီးကြည့်ဘို့ ပုံကို ၂ ခါလောက် နှိပ်ပါ)
လန်ဒန်ကBig Ben နာရီစဉ်ကြီး၊
“ရက်ပေါင်း ၈၀ အတွင်းမှာ ကမ်ဘာကိုပတ်ဖြစ်အောင်
စာရေးဆရာJules Verne ရဲ့နံမယ်ကျော်ခရီးသွားမှတ်တမ်းဝတ်ထုမှ
Around the world in 80 days at the lemon festival in Menton, France – Telegraph
၁၄၅၀၀၀ ကီလိုဂရမ် အလေးရှိတဲ့အသီးတွေကိုအသုံးပြုကြောင်း
A worker gives the finishing touches toamodel ofatrain nearareplica of the houses of Parliament made of lemons and oranges during the 80th lemon festival in Menton, the south of France. Some 145,000 kilograms of lemons and oranges are used to make displays during the festival. The theme for the 80th festival is Around The World In 80 Days, and it runs from February 16 until March 6..
၂၀၁၂ က ဆောင်ပုဒ်ကတော့ “ကမ်ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးတွေ”ဆိုတာပါ၊
Lemon festival opens in the French Riviera town of Menton – Telegraph
အသုံးပြုတဲ့အသီးတွေက ၁၄၅ မက်ထရစ် တန်ချိန် အလေးရှိကြောင်း
A worker gives the final touches toamodel ofapre-Columbian temple made out of lemons and oranges, during the lemon festival in Menton, southern France. Some 145 metric tons of citrus fruits are used to make displays during the festival, which runs from February 18 through March 9. This year’s theme is “The Greatest Civilisations”.
၂၀၁၁ က ဆောင်ပုဒ်ကတော့ “ရုပ်ရှင်လောက” ဆိုတာပါ၊
ရုပ်ရှင်လောက က ရှုခင်းတွေကိုပုံတူလုပ်တာ
The Menton lemon festival in pictures – Telegraph
It is the 77th year that Menton has held its Lemon Festival, which was introduced because the zesty fruits grown in the region are said to be superior in taste.
80th Fête du Citron® – Menton – Frenchriviera-tourism
Menton Citrus Fruit Festival | Flickr – Photo Sharing!
Menton Citrus Fruit Festival (4) | Flickr – Photo Sharing!
ရာသီ သမ တဲ့အရပ်ဖြစ်ပြီး၊
ပန်းဥယျာဉ် အလှအပတွေက စုံလို့ဘဲ
Menton Tourist Attractions | PlanetWare
တောင်အမေရိကတိုက် Brazil, Chile စတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ
( ဒေါင်း လည်ပင်းအောက်နားက” ခေါင်း” တလုံးရှိတယ်နော်)
Flickr: Search phillipbonsai’s photostream
Menton Lemon Festival® | Carnivals & Festivals 2013 | USA – Official website of the France Tourism Development Agency | beta 2
Menton Lemon Festival®
From February 16, 2013 to March 06, 2013
The Menton Lemon Festival or Fête du Citron® isaunique event, annually attracting over 230,000 visitors. It involves more than 300 professionals and requires 145 tons of citrus fruits. The annual International Orchid Festival and Menton Craft Fair are both held at Menton’s Palais de l’Europe at the same time as the Menton Lemon Festival.
Lemon Festival 2013 ~ Fête du Citron 2013 | Take Me Holidays
Lemon Festival 2013 – Fête du Citron 2013
ရှောက်သီးနဲ့လိမ်မော်သီး တန်ချိန် ၁၄၅ တန်အသုံးပြုရကြောင်း
Lemon Festival – It’s All Yellow and Orange
The very bright colors of yellow and orange are going to garnish the city of Menton, France because the Lemon Festival 2013 or Fête du Citron 2013 will be held. This lemon festival has been held for 79 years and the next 2013 will be the 80th festival in which 145 tons of citruses and oranges are utilized to make gigantic sculptures in the form of animals, knights, and buildings.
၂၀၁၁ တုန်းကလူပေါင်း ၂၅၀၀၀၀ လာကြည့်ကြကြောင်းဆိုထား
Some people may assume this festival asahuge waste of fruits, but people in Menton think of it as delightful moments where great arts are shown. In 2011, this festival succeeded in gathering 250,000 people in the middle of Menton city to observe the great yellowish sculptures of citruses and oranges.
When is Lemon Festival / Fête du Citron 2013?
Lemon Festival / Fête du Citron 2013 will be held from Saturday, 16 February 2013 to Wednesday,6March 2013.
When is Lemon Festival / Fête du Citron 2012?
Lemon Festival / Fête du Citron 2012 was held from Friday, 17 February 2012 to Wednesday,7March 2012.
၂၀၁၂ တုန်းကဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် ၇၀၀၀ ကို ဘိတ်ခေါ်ငှါးရမ်းကာ အသီးတွေကို ပန်းပုရုပ်ပုံလိုဖြစ်လာအောင် ဖန်ခိုင်းရကြောင်း
Lemon Festival Celebration
In 2012, the festivals invite 7,000 professional artists to form the citruses into gigantic sculptures. About EUR9 until EUR23 should be paid by the visitors to get involve in this sweet-smell festival. In the forthcoming Menton Lemon Festival, many kinds of parades will be organized; some of them are the Parade of Golden Fruit and the Moonlit Parade. By the end of the Moonlit Parade, beautiful fireworks will be set to enliven the night of the festival. Besides the parades, the visitors will also be able to attendaCitrus Exhibition and the Garden of Light,asquare illuminated by colorful light at night.
ဝင်ကြေးက ရပ်ကြည့်တာEuro dollar ယူရို ၉ မှထိုင်ကြည့်တာ Euro ယူရို ၂၃ အထိ ဆိုဘဲ
To attend the parades and many other attractions in the Menton Lemon Festival, an entrance ticket is required. The price of entrance ticket to the Menton Lemon Festival ranges from EUR9 until EUR23 depending on the facilities given and the number of attractions the visitors wish to attend. The ticket to view the parades while standing will be much cheaper than sitting (9 ? for standing ticket and 17 ? for the sitting ticket), and another entrance fee is required to attend the citrus exhibition. The ticket prices will be less expensive if the visitors come inagroup of 20 or more people. Although the ticket prices are quite expensive, it doesn’t lower people’s desire to visit the unique Menton Lemon Festival.
ဒီမှာလည်း လာမဲ့ သင်္ကြန် နှစ်သစ်ကူးပွဲတွေကို တိုင်းရင်းသားနာမည်လေးတွေ ဒါမှ မဟုတ် မြို့ ဒေသနာမည်လေးတွေ ပေးပြီး ထွက်ကုန်တွေနဲ့ အလှဆင်ပြီး မဏ္ဍပ်တွေ ဆောက်ရင် တိုးတွေအတွက်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ရိုးရာပွဲတခုဖြစ်လာမှာ။
အခုတလော မတွေးကောင်းတောတွေ တွေးတွေးနေလို့ ဆေးလှုပ်သောက်ရမလို ဖြစ်နေတယ်
အသီးတွေ စားချင်တာဟယ် ပွဲပြီးသွားရင် စားကြတာလား လွှင့်ပစ်ကြတာလားမသိ
လှပတဲ့ ပွဲတော်ပုံလေးတွေနဲ့ ဗဟုသုတပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒေါင်းလည်ပင်းအောက်က ခေါင်းလေးက သူကြီးမျက်နှာဖြစ်ရမယ်။
မြန်မာတွေ အဲလိုသာစုမိရင်.. ရန်ဖြစ်မှာလားပဲ..
ဒီလိုအလှဆင်ဖို့အတွက် အတတ်ပညာ (မီးပုံပျံ လုပ်သလိုမျိုး) ရှိဖို့ လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ပညာအား၊ လူအား၊ ငွေအား နဲ့ ကြိုးစားရတာမို့ အကုန်အကျလည်း ပေမယ့်…..
လာကြည့်တဲ့ ဧည့်သည်များလို့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ အများကြီးရပြီး အဲဒီဒေသတော့ စီးပွားရေး ဈေးကွက်တစ်ခု ရသွားတာပေ့ါ။
စိတ်ဝင်စားမိတာ တစ်ခုက စားရမယ့် ပစ္စည်းကို အလှဆင်တဲ့ နေရာမှာ သုံးတာဟာ စားသုံးကုန်ကို အလဟဿ ဖြစ်နေသလားလို့။
ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမို့ မထောင်းသာပေမယ့် တကမ္ဘာလုံးနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် ဆင်းရဲမွဲတေပြီး ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေကြရတဲ့ လူတွေအများကြီးရဲ့ မျက်နှာတွေကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ရင်…….. :buu:
ကျနော်လည်း မမ အတိုင်းပဲ တွေးမိတယ်။ :buu:
နာဆို အရုပ်လုပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ အရုပ်ကို ဖစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး…
ဂလောက်များတဲ့ ရှောက်သီးတွေ ဘယ်လိုလုပ်စားမတုန်းဟ။
မကျေနပ်တဲ့သူ ရှောက်သီးနဲ့ ကောက်ပေါက်။
ကြေးမုံဂျီးသည် တရုပ်စစ်ဖက် ဆိုင်ဘာသူလျှိုလော ဘာလောညာလော ….. ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သိပ်အာဘောဓာတ် များသောကြောင့်ဗေတီး….။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက လုပ်ငန်း အများစု အပါအဝင် ကမ္ဘာ တဝန်း အဖွဲ့ အစည်း များရဲ့ ကွန်ပြူတာ ကွန်ယက်တွေကို အင်တာနက် ကနေ တရား မဝင် ချိုးဖေါက် ဝင်ရောက်ပြီး အချက် အလက်တွေ ခိုးယူ၊ အကြီး အကျယ် အနှောင့် အယှက်ပေး နေတာ တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တရုတ် စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ ဌာန တခု ရှိနေ တယ်လို့ ယုံကြည် ရကြောင်း အမေရိကန် အခြေစိုက် ကွန်ပြူတာ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ တခု ဖြစ်တဲ့ Mandiant က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လက တရုတ် ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင် ရဲ့ ကြွယ်ဝမှု တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြ ခဲ့တဲ့ နယူးယောက် တိုင်းမ် သတင်းစာ တိုက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ကွန်ယက်ထဲ က အချက် အလက် တွေ အင်တာနက်က တဆင့် ခိုးယူတာ ခံခဲ့ရပြီး နောက်မှာ Mandiant ကုမ္ပဏီကို ဌားရမ်း စုံစမ်းစေ ခဲ့ရာက၊ အခုလို ရှာဖွေ တွေ့ရှိ နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် စစ်တပ်ရဲ့ လှျို့ ဝှက် တပ်ဖွဲ့ တခု ဖြစ်တဲ့ ယူနစ် ၆၁၃၉၈ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာ တဝန်းက အဖွဲ့ အစည်း ပေါင်း ၁၄၁ ခု ကနေ သတင်း အချက် အလက် ပမာဏ အားဖြင့် ဂစ်ဂါဘိုက် (Gigabyte – GB) သိန်းနဲ့ ချီပြီး စနစ်တကျ နဲ့ ခိုးယူ ခဲ့တယ်လို့ Mandiant ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ အဖွဲ့ ဘယ်မှာ အခြေစိုက် သလဲ ဆိုတာကို လိုက်ထောက် လှမ်း ကြည့်တော့ ရှန်ဟိုင်း မြို့က သာမန် အဆောက် အအုံ တခု ဖြစ်နေ တာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။
Mandiant ကုမ္ပဏီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄ က စပြီး ကျူးလွန် ခဲ့ကြတဲ့ အင်တာနက် ပေါ်က အချက် အလက် ခိုးယူ မှုတွေကို ခြေရာခံခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အများစု ကတော့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ တွေကို အသုံးပြုပြီး လုပ်တဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ လက်ချက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ သူလှျို အဖွဲ့ တွေကို သူတို့က အက်တားစ်လို့ အမည် ပေးထားပါတယ်။ Mandiant ကုမ္ပဏီက သူတို့ တွေ့ရှိ ခဲ့တဲ့ အချက် အလက်တွေ အရ ဒီလို အင်တာနက် ပေါ်ကနေ သူလှျို အလုပ်တွေ လုပ်နေကြသူ အများစု ဟာဖြင့် တရုတ် ပြည်မှာ အခြေစိုက် ကြတာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီလို လူတွေရှိ နေတာကို တရုတ် အစိုးရ ကလည်း သိတဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်။
အဲဒီ သူလှျို အဖွဲ့တွေထဲက အကျွမ်းကျင်ဆုံး ကတော့ဖြင့် အေပီတီ ၁ လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ လောက်က စပြီး လှုပ်ရှား နေခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို နှစ်ရှည် လုပ်ကိုင် နေခဲ့တာကို ကြည့်ရင် သူတို့ကို အစိုးရ ဘက်နေ ထောက်ပံ့ ပေးနေတာ ဖြစ်နိုင် တယ်လို့ လည်းပြောပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် သူတို့ ကုမ္ပဏီက ဒီ အေပီတီ ၁ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေကို လိုက်ကြည့် လိုက်တော့ ရှန်ဟိုင်းက ပူဒေါင်း အရပ်မှာ ရှိတဲ့ ၁၂ ထပ် အဆောက် အအုံ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ တရုတ် စစ်ဘက်ရဲ့ ယူနစ် ၆၁၃၉၈ ဟာလည်း အဲဒီမှာပဲ အခြေပြု ထားတဲ့ အပြင် အဲဒီ အဖွဲ့တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ တွေဟာ လည်း ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နယူးယောက် တိုင်းမ် သတင်းစာကို ခိုးဝင် ခဲ့တာ ကတော့ တရုတ်ပြည် ကပဲ တခြား အဖွဲ့ တဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ခိုးယူ ခံရတာ မျိုးက နယူးယောက် တိုင်းမ် အပြင် သာဝေါ်လ်စထရိ ဂျာနယ် မှာလည်း ကြုံခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနဘက် ကတော့ ဒီလို နယူးယောက် တိုင်းမ်ရဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆို မှုတွေဟာ အခြေ အမြစ် မရှိတဲ့ အကြောင်းနဲ့ တရုတ် ဘက်က ဒီလို အင်တာနက် ပေါ်က သတင်း အချက် အလက်တွေ ခိုးယူတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဆောင်ရွက် ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အထောက် အထား မရှိဘဲ စွပ်စွဲ တာဟာ တာဝန်မဲ့ လွန်းရာ ကျတယ်ဆိုပြီး တုံ့ပြန် လိုက်ပါတယ်။ BBC News
ဟွန်း.. သူများတွေက စိမ်းလို့ ငါ့ကြတော့ ရေရောထားတဲ့ ကြံရည်ရောင်ဂျီး.. သေမထူး နေမထူး ဘဝမှာ ကြေးမုံဂျီးရယ် ဒို့…. ဝေးဂျပီပေါ့… :eee: